10 Awesome လိင်တူချစ်သူ Friendly ရည်ရွယ်ချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 Awesome လိင်တူချစ်သူ Friendly ရည်ရွယ်ချက်များ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
မင်းက Diva လား, ဖက်ရှင်, ကွမ်းခြံကုန်း, လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, သို့မဟုတ် Self- အဓိပ္ပာယ်အဘို့အဆင်သင့်မ, ဤ 10 ကြောက်မက်ဘွယ်သောလိင်တူချစ်သူခရီးသွားနေရာများသငျသညျပူးပေါင်းနှင့်ဆင်နွှဲပါလိမ့်မယ်. ပဲရစ်မှာအနမ်းကနေဘာလင်မှာရော့ခ်ကြယ်ပွင့်ကဲ့သို့ပါတီရန်, ဒီအံ့သြဖွယ်ဥရောပမြို့ကြီးအားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်။ ဖြစ်ကြသည်, မာန်မာန, နှင့်သက်တံအားလုံးအရောင်များအတွက်ချစ်ကြတယ်.
1. ကမ္ဘာပေါ်တွင် LGBT နှင့်အဆင်ပြေဆုံးနေရာဖြစ်သည်: ဘာလင်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးလိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချစ်သူများအသင်းကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်. 1897 ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းမှတ်သားသောနှစ်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာ၏လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်တူချစ်သူမြို့တော်မှဘာလင်ရဲ့အသွင်ပြောင်း.
အလှအပနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်, အရောင်များ, နှင့်လိင်. ဘာလင်သည်သည်းခံမှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, ပွင့်လင်း, ကမ္ဘာပေါ်ရှိမြို့များကိုကြိုဆိုခြင်း. ဘာလင်သည်ဥရောပ၌ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် LGBT နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးမျိုး. ယနေ့တွင်, ဘာလင်သည် LGBT ၏အန္တိမနေရာဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့် ၂၀ ရာစုအတွင်းမှာပဲလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်, မြို့သူမြို့သားလုပ်သမျှကာလပတ်လုံးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်.
Schoneberg မှ Nollendorfplatz သည်ဘာလင်ရှိနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောလိင်တူချစ်သူမြင်ကွင်း၏စိတ်နှလုံးနှင့်ရိုင်းစိုင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်. ဒီမှာ, မင်းပါတီပွဲလုပ်, မင်း, သောက်စရာ, လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုခံစားပါ.
လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာနွေရာသီဖြစ်သည်, မော်ကွန်း CSD ဘာလင်၌တည်၏. နီးပါး 1 လူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ရာပေါင်းများစွာအလှဆင် float ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးမာနထောင်လွှားချီတက်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးပါ, တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးနှင့်သက်တန့်အရောင်များအားလုံးတွင်ချစ်မြတ်နိုးရန်လွတ်လပ်ခွင့်သည်.
လိင်တူချစ်သူ Schwules ပြတိုက်သို့သွားရောက်, လိင်တူချစ်သူလှုပ်ရှားမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး, ကျော်ကြား Marietta ဘား, Berio ကဖေး, အသက်အကြီးဆုံး Heile Welt လိင်တူချစ်သူကလပ်, သို့မဟုတ် KitKat-Klub တွင်အကောင်းဆုံး queer ပါတီအတွက်ဖြစ်သည်.
2. နယ်သာလန်၌ Awesome လိင်တူချစ်သူ Destination: အမ်စတာဒမ်
သင်သည်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုတရားဝင်တရားဝင်ပြုလုပ်သောကမ္ဘာတွင်ပထမဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်, သင်သည်လည်းကမ္ဘာပေါ်တွင်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအရှိဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, ပျော်စရာကောင်းပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမ်စတာဒမ်သည်ဥရောပ၌ပထမဆုံးသောဂေးဂိမ်းများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်မြို့ဖြစ်သည် 1998 နှင့်အမ်စတာဒမ်၏မာနထောင်လွှားချီတက်ပွဲကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်စဉ်းစားသည်.
သငျသညျမွို့၌ဝင်တိုက်ဖို့ရာအရပ်တို့ကိုမသိရလျှင်, ထို့နောက်မှာအားဖြင့်ရပ်တန့် ပန်းရောင်ပွိုင့်, လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက်နေရာ- အမ်စတာဒမ်ရှိဖော်ရွေအစက်အပြောက်. အမ်စတာဒမ်မှာကြောက်စရာကောင်းတယ် နိုက်ကလပ်, ဒါပေမယ့်နေဝင်မီ, နောက်လမ်းများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်သင်လမ်းလျှောက်သင့်သည်, ဘယ်မှာ LGBT မြင်ကွင်းတစ်ခုအသက်ရှူနှင့်ကန်: နေပြည်တော်, သမိုင်းဝင် Kerkstraat, Amstel, ထို့နောက် Zeedijk နှင့် Warmoesstraat သို့အမ်စတာဒမ်ရှိ LGBT ၏ nightlife မြင်ကွင်း.
ဘုရင်မကြီးရဲ့ ဦး ခေါင်း၌နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဆွဲမြင်ကွင်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိ, အဆိုပါ Getto အတွက်ကော့တေးအပေါ် sip, အမ်စတာဒမ်ရဲ့ LGTB စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာမှုတ်သွင်းရ, ပျော်ရွှင်ခြင်း, နှင့် Reguliersdwarsstraat လမ်းရှိ Taboo သို့မဟုတ် Exit ကလပ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း. ဖြည့်စွက်ကာ, အမ်စတာဒမ်တူးမြောင်းတူးမြောင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်သို့လည်ပတ်ရန်ထူးခြားသည့်မာနကြီးသည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်.
3. ယူကေတွင်အကောင်းဆုံးလိင်တူချစ်သူများထံမှအဆင်ပြေသောနေရာ: Brighton
1930 ရဲ့ Brighton ဟာသူတို့ရဲ့လိင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းလူတိုင်းအတွက်လုံခြုံခိုလှုံရာဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းက. တစ်ချိန်ကပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောလိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်, အနီးကပ်ပေမယ့်မြို့တော်ကနေဝေး.
Kemp Town ရပ်ကွက်သည် Brighton ရှိ LGBT GBရိယာဖြစ်သည်, ၎င်း၏စူပါဟိုတယ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အရက်ဆိုင်, နှင့်စားသောက်ဆိုင်များ. ဒီမှာ, သင်အံ့သြဖွယ် Vibe တွေ့ပါလိမ့်မယ်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်းပနိုင်သောအေးစက်သောလေထု. ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ရည်းစားနှင့်အတူလမ်းအပေါင်းတို့သွားကြဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Brighton တွင် Royal Pavilion ကဲ့သို့သောမင်္ဂလာဆောင်နေရာအနည်းငယ်သာရှိသည်, နှင့်ထိုအရပ်မှဖြောင့်ထိုအရပ်မှချားလ်စ်လမ်းသို့မဟုတ် Brighton ကမ်းခြေပေါ်တွင်ပွဲတော်စတင်ပါ.
လိင်တူချစ်သူဘူလ်ဒိုရာအရက်ဆိုင်၌ပိုင့်ခံစားပါ, ဒါပေမယ့်ပထမဆုံး Brighton Sauna မှာအနားယူပါ, နှင့် Revenge အတွက်ညဉ့်ကိုအပြီးသတ်, ထိပ်တန်းလိင်တူချစ်သူများ၏ညဥ့်ကလပ်.
4. ဂျာမနီရှိကြောက်မက်ဘွယ်သော LGBT ဖော်ရွေသောမြို့: Cologne
လူများထက်အရက်ဆိုင်နှင့်အတူမြို့, နှင့်အခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုထက်ပိုမိုမာနဖြစ်ရပ်များ, Cologne သည်ဥရောပရှိ LGBTQ နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Cologne သည် LGBTQ နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး၎င်း၏ Gaily ခရီးစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သင်မည်သည့်အရသာနှင့်သက်တံ့အရောင်အတွက်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်.
ဖြည့်စွက်ကာ, Cologne သည် LGBT ၏အဆုံးစွန်သောနေရာဖြစ်သည်, အကြောင်းကတော့2လိင်တူချစ်သူမြင်ကွင်းများ, ဟုတ်ကဲ့၊. ငယ်ရွယ်သောလူစုလူဝေးအတွက် Heumarkt-Mathiasstrasse နှင့်မြို့ပြဘာမြူဒါတြိဂံ. အနောက်ဘက်တွင်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အရှေ့ဘက်ကိုအလွယ်တကူပြန်လည်နေရာချရန်နှင့်ရိုးရာအစဉ်အလာဆုံရာနေရာများအတွက်အကောင်းဆုံးပါတီများနှင့်ကကလပ်များရှိသည်.
နှစ် ဦး စလုံးလည်ပတ်ရန်အချိန်မရှိကြပါဘူး? မပူပါနဲ့! S-Bahn မြေအောက်ရထားနှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်သည်, သငျသညျအကြိမ်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်စူပါအစာရှောင်ခြင်းခရီးသွားလာနိုင်ပါတယ်.
Cologne ရဲ့ခရစ္စတိုဖာလမ်းနေ့ကိုမမေ့ပါနှင့်, သင်တန်း၏ကမ္ဘာကျော် Cologne မာန. ဖြည့်စွက်ကာ, Cologne ရဲ့ဂေးခရစ်စမတ်စျေးကွက်, နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ပွဲတော်. ပြီးနောက်ပါတီအဘို့အလှဆင်ထွက်စစ်ဆေးပါ5သို့မဟုတ် Amadeus.
5. ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကြောက်မက်ဘွယ်သော LGBT ဖော်ရွေခရီးစဉ်: ပဲရစ်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချစ်ဆုံးမြို့တော်သည်အချစ်ကိုမိနစ်တိုင်းတွင်ကျင်းပသည်, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသက်တံရောင်စုံအရောင်များကိုဂုဏ်ပြုရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါတယ်. glam အပြည့်အဝ, စတိုင်လ်, အတန်းအစား, နှင့်ပျော်စရာ, ပဲရစ်သည်အထင်ရှားဆုံးလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်- ကမ္ဘာပေါ်မှာဖော်ရွေနေရာများ.
လှပသော Marais သည်ပါရီရှိလိင်တူချစ်သူများ၏အဓိကနေရာဖြစ်သည်, နာမည်ကြီး Place de la Bastille တွင်တည်ရှိသော LGBT နေရာများအားလုံးနှင့်အတူ, သမ္မတရင်ပြင်, နှင့်ဟိုတယ်က de Ville. တစ်နှစ်ပတ်လုံး, ဇန်နဝါရီလမှဇူလိုင်လအထိ, LGBT အသိုင်းအဝိုင်းထံအပ်နှံထားသောအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပ်များရှိသည်: ပွဲတော်များ, အနုပညာ, ရုပ်ရှင်, နှင့်သင်တန်း၏မာနထောင်လွှားချီတက်. ဒီမှာ, သငျသညျအိမျမှာညာဘက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်, LGBT ၏ပြင်သစ်အသိုင်းအဝိုင်းကိုလေ့လာရန်နှင့်ပါရီကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်.
go-go သိပ်ပြီးနှင့် sexy အကများအတွက် Raidd Barn, Macaroon နှင့် Seine ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်များအတွက် Cite de la Mode et du Design ၏ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ Debonair ကဖေး, နှင့်ခေတ်မီဆန်းသစ်သောပြင်သစ်အနုပညာရှင်အားလုံးအတွက် Badaboum ဘစ်စထရို, နောက်ခံရှိ Eiffel Tower နှင့်နမ်းပါ.
6. သြစတြီးယားရှိ LGBT နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောမြို့တော်: ဗီယင်နာ
ကြွယ်ဝသောသြစတြီးယားသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်လိင်တူချစ်သူemကရာဇ်မင်းများအကြောင်းပုံပြင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ဒါကြောင့်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်း- ဖော်ရွေဒီလှပသောမြို့ရဲ့ DNA ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ထိုကွောငျ့, အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဗီယင်နာ၌သင်တို့ကိုသွားနိုင်ပါတယ်2လိင်တူချစ်သူများအသိုင်းအဝိုင်း၏သမိုင်းနှင့်ဘဝကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိင်တူချစ်သူများအတွက်မြို့တော်သို့လာရောက်ခြင်း. ဖြည့်စွက်ကာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းရှိအခြား LGTB ဖော်ရွေနေရာများနှင့်ဆင်တူသည်, တစ်နှစ်ပတ်လုံးသင်ရေတွက်နိုင်သည့် LGTB ဖြစ်ရပ်များပိုမိုများပြားပါသည်.
နှစ်၏အထူးခြားဆုံး LGBT ဖြစ်ရပ်များအနက်တစ်ခုမှာ Rainbow Ball ဖြစ်သည်. ဟိုတယ် Schonbrunn ဒီခမ်းနားဘောလုံးကို hosting ဖြစ်ပါတယ်, Waltz ကိုကကပြနိုင်ပြီးသင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဘောလုံးဝတ်ရုံများနှင့်စတုဂံများ၌သင်တို့၏ဖက်ရှင်ဆန်သောပုံစံကိုပြသနိုင်သည်.
Cafe Savoy တွင်ဗီယင်နာကော်ဖီကိုမြည်းစမ်းပါ, Heaven Vienna ကလပ်တွင်အလှမယ် Candy နှင့်အတူညစာစားမည်, ငါအံ့သြဖွယ် Alpine setting တွင်ငါ Dos ဟုပြောသည်, မြို့တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာအားလုံးသင့်ပတ်လည်အခါနှင့်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူ.
7. အိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့ Awesome LGBT ဖော်ရွေစီးတီး: Dublin
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အိုင်ယာလန်အများအပြားအလွန်တင်းကျပ်အဖြစ်လူသိများသည်, ဘာသာရေး, နှင့်အချိန်အတွက်အေးခဲ. သို့သျောလညျး, သောတက်ကြွသော Dublin နှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး, ပျော်စရာ, နှင့်အလွန်လိင်တူချစ်သူ- ဖော်ရွေ. တွင် 2015, လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတရားဝင်ဖြစ်လာသည်, လစ်ဘရယ်သို့အိုင်ယာလန်ရဲ့အသွင်ပြောင်းဖို့အံ့သြဖွယ်မှတ်တိုင်, ပွင့်လင်းသောနိုင်ငံ.
ထို့ကြောင့်, သငျသညျ Dublin အံ့သြဖွယ်အခြားရွေးချယ်စရာ LGBT ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်- အမ်စတာဒမ်နှင့်ဘာလင်မှဖော်ရွေ ဦး တည်ရာ. ဇွန်လ Dublin ၌မာနသည်လဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်သင်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Dublin လိင်တူချစ်သူပြဇာတ်ရုံကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး.
ဂျော့ဘားတွင်ကော့တေးသို့မဟုတ်ပါတီပွဲများ, Dublin ရှိလိင်တူချစ်သူအဖွဲ့အစည်း, PantiBar, အော်စကာကဖေး, ခရီးသွား, သို့မဟုတ်အနားယူရန်လိင်တူချစ်သူсаунаသို့မဟုတ် Dublin ရှိအံ့သြဖွယ် LGTBQ အသိုင်းအဝိုင်းပျော်မွေ့ရန်လုပ်ဖို့အဆုံးစွန်သောအရာဖြစ်ကြ၏.
8. ကြောက်မက်ဘွယ်လိင်တူချစ်သူ Friendly Destination: ဘယ်လ်ဂျီယံ
Ghent နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်ကိုအဖြစ်လူသိများကြသည်2ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်လိင်တူချစ်သူများအတွက်အဆင်ပြေဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ဤတိုင်းပြည်သည်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုတရားဝင်တရားဝင်ခွင့်ပြုသည့်ဒုတိယဖြစ်သည်. ဘရပ်ဆဲလ်မှာ, Rue du Marche au Charbon ဟာလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အဓိကနေရာဖြစ်တယ်.
ဥပမာ, သက်တန့်အိမ်မှာ, သင် Lesborama ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပျော်မွေ့နိုင်သည်, အနုပညာပြပွဲ, နှင့်များစွာသောအခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ. သို့သျောလညျး, သငျသညျ mama သဘာဝသငျသညျကိုပေးသောအရာကို flaunt ချင်လျှင်, ထို့နောက် Chez Maman သည်အရောင်များအားလုံးနှင့်သက်တံရောင်တောက်ပသောအရောင်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုကြိုဆိုသည်.
လူဇင်ဘတ်လူတစ် ဦး ရထားနှင့်အတူဘရပ်ဆဲလ်သို့
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူဘရပ်ဆဲလ်သို့ Antwerp
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူဘရပ်ဆဲလ်မှပဲရစ်
9. ကြောက်မက်ဘွယ် LGBTQ Friendly Destination: လန်ဒန်
အနောက်ဘက်အဆုံး, အရက်ဆိုင်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ဘုရင်မ. လန်ဒန်ဟာတော်ဝင်မင်းသမီးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲအိုင်ကွန်တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာဥရောပမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လိင်တူချစ်သူတွေဆီသွားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လို့ပါ. ဒီမြို့ဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှလူများကိုကြိုဆိုသည့်မြို့ကိုဆိုလိုသည်, စူပါနွေးနှင့်လိင်တူချစ်သူမှဖော်ရွေသည်, လိင်တူချစ်သူ, ကွမ်းခြံကုန်း, သို့မဟုတ်လိင်.
သီးသန့်စာအုပ်ဆိုင်, အံ့သြစရာ ခေါင်မိုးပေါ်အရက်ဆိုင်, ပြဇာတ်ရုံ, နှင့်ဂီတ, လန်ဒန်မြို့ရှိ LGBT ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အကောင်းဆုံးကိုခံစားရန်ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစက်အပြောက်တယ်.
ဒါကြောင့်, သငျသညျလန်ဒန်ရှိ LGTB ၏အကောင်းဆုံးခံစားချင်လျှင်, အကောင်းဆုံး cabaret အတွက် Dlastone Superstore သို့သွားပါ. အကောင်းဆုံး queer မြင်ကွင်းတစ်ခုသည်, အဆိုပါ Glory အရက်ဆိုင်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အင်္ဂလန်ရှိရှေးအကျဆုံး LGBT စာအုပ်ဆိုင်အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့သေချာပါစေ, လိင်တူချစ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပါပဲ.
10. ဂရိတ် LGBT ဖော်ရွေရည်ရွယ်ချက်များ: မီလန်
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအခြားလိင်တူချစ်သူများ - ဖော်ရွေမြို့ကြီးများနှင့်မတူဘဲ, လိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေးများကိုမီလန်တွင်တရားဝင်မဟုတ်ပါ. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကမ္ဘာပေါ်ရှိဖက်ရှင်နှင့်ကြော့ရှင်းသောမြို့တော်သည်လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချစ်သူများအတွက်နှစ်စဉ်ကျင်းပသော LGTBQ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုပင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်.
မီလန်မှာ, Porta Venezia ရပ်ကွက်သည် LGBT ၏ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အချက်အချာဖြစ်သည်. Lecco နှင့် San Martini လမ်းများပေါ်တွင်, သငျသညျအအေးဆုံးလိင်တူချစ်သူ - ဖော်ရွေဘားများနှင့်ကလပ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်.
ဒါဟာဥရောပတစ်ခွင်ခရီးသွားနှင့်လေ့ကျင့်ရန်လေ့ကျင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် တစ်ဦးကရထား Save LGBT နှင့်အဆင်ပြေသောနေရာများကိုရှာဖွေရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ, ဒါကြောင့်မင်းတို့အတွက်ဒီ blog post ကိုရေးတာဒါကြောင့်ပဲ.
သင်၏ blog တွင်“ Awesome LGBT Friendly Destinations ၁၀ ခု” ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုတင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သက de မှ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကား / ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
လိင်တူချစ်သူ လိင်တူချစ်သူ လိင်တူချစ်သူ လိင်တံ ချစ်တယ် LGBTFriendly လမ်းညွှန်များ LGBTQ မင်္ဂလာပါ
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား